PC နဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ Display ပိုင်းက ဘာလို့ ပိုအရေးကြီးတာလဲ အပိုင်း (2)
စမတ်ဖုန်းနဲ့ PC တွေမှာ Display ပိုင်းက Performance ထက် အရေးပါတာလဲ အပိုင်း (၂)
ပထမပိုင်းမှာတုန်းက Laptop နဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ TN (Twisted Nematic) ၊ IPS (In-plane Switching) နဲ့ OLED အကြောင်း အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
အပိုင်း (၁) ကို ဒီ Link မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်
အပိုင်း (၂) မှာတော့ Display တစ်ခုရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ Resolution ၊ Brightness Control ၊ Refresh Rate နဲ့ အမြင်အာရုံပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ Flicker ၊ Blue Light အကြောင်း ပြောသွားမှာပါ။
Display နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြတဲ့ အပိုင်း (၂) မှာ နည်းပညာပိုင်း ၊ သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးနှုန်း ၊ ဗဟုသုတ များစွာ ပြောထားပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေ အားလုံးကိုလည်း စိတ်ကြိုက် Share ခွင့် ပေးထားပြီး အကယ်၍ တဖန် အသုံးပြုလိုလျှင် Respect ထားဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အစဥ်မြဲ အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ကို ချစ်ပေမယ့် မလိမ့်တပတ် ယူသုံးနေသူတွေရှိတဲ့အတွက် စကားချည်ထားရတာပါ။
Resolution ဆိုတာ ဘာလဲ
အလွယ်ကူဆုံး ပြောရရင် Resolution ဆိုတာ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ ၁ လက်မ ပုံဖော် မျက်နှာပြင်မှာ ပါဝင်တဲ့ Pixel Density သိပ်သည်းဆနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ။
စာဖတ်သူတွေ ဇဝေဇဝါ မဖြစ်စေလိုတာက Pixel Count နဲ့ မရောစေလိုတာ ဖြစ်ပြီး Pixel Density ဆိုတာ ၁ လက်မ မှာ Pixel ဘယ်လောက် ထည့်ထားလဲနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာပါ။
ဒါကို ppi (Pixel per Inch) အသုံးနှုန်းနဲ့ တိုင်းတာပြီး ၁ လက်မမှာ Pixel အလုံးရေ ဘယ်လောက်ပါသလဲ?
အမြင်သာဆုံး ပြောရရင် 1080p Resolution ရှိ ၁၃ လက်မ Laptop တစ်လုံးနဲ့ ၅ လက်မ အရွယ် ဖုန်းတစ်လုံးကို စိတ်ကူးနဲ့ နှိုင်းယှဥ်ကြည့်ပါ
Pixel Density = ppi (Pixel per Inch)
Laptop မှာ Pixel ကွက်တွေ အထင်းသား မြင်နေရမှာဖြစ်သလို Screen အရွယ်စား ပိုသေးသွားတဲ့ စမတ်ဖုန်းမှာကျ တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် ပိုကျစ် ပိုသိပ်သည်းသွားတဲ့အတွက် Pixel ကွက်တွေ ဖျောက်ထားသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီအချက်အပြင် ၅ လက်မ စမတ်ဖုန်းရဲ့ 1080p မျက်နှာပြင်ဟာ ၁၃ လက်မ Laptop ထက် အဆများစွာ ကြည်လင် ပြတ်သားနေမှာဖြစ်ပြီး Sharpness နဲ့ Cripness ၂ မျိုး လုံးဝ အားသာနေမှာပါ။
ဒါကိုတော့ အမြင်အားဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အချက်လို့ ပြောနိုင်ပြီး စာသံ ၊ ပေသံမှာ ဘယ်လို သုံးနှုန်းကြသလဲဆိုရင်
၁ လက်မ ပုံဖော်မျက်နှာပြင်မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Pixel အရေတွက် Pixel Count ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အရေတွက်ပိုများလေ ပိုပြီး သိပ်သည်းလေ တနည်းအားဖြင့် Pixel Density များလာတဲ့အတွက် အနုစိပ်စိပ် ဖော်ပေးနိုင်တာပါ။
1080p Resolution သုံးထားတဲ့ ၅ လက်မ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ ppi ဟာ 441 အထိ ရှိနိုင်ပြီး ၁၃ လက်မ Display မှာကျ 131 လောက်ပဲ ရှိတဲ့အတွက် ၃ ချိုး ၁ ချိုးကွာတယ်လို့ တွက်နိုင်ပါတယ်
သီအိုရီအရ Resolution မြင့်လေ ကြည်လင်ပြတ်သားလေ ဆိုပေမယ့် စကားပြောတဲ့ အချက်က Pixel Count နဲ့ Pixel Density တို့ပါ။
ဒီနှစ်ကောင်ကလည်း Screen အရွယ်စားလိုက်ပြီး Quality ပြောင်းပေးသေးတဲ့အတွက် ဗဟုသုတ အဖြစ် သိစေလိုပါတယ်။
အခုလို ppi နဲ့ ပတ်သက်လို့ အရေးပါတာ သိပြီးသွားရင် နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ စဥ်းစားဖို့ လိုတာက Aspect Ratio ပါ။
Samsung Phones are known to their OLED Panels
What does Aspect Ratio Matters?
Resolution ကို ပုံမှန်အတိုင်း သတ်မှတ်ထားလို့ ရပေမယ့် Aspect Ratio မတူရင် ppi လည်း မတူပါဘူး
ဒါနဲ့ Aspect Ratio က ဘာပြောတာလဲ?
စာဖတ်သူတွေ သိထားတဲ့အတိုင်း 4:3 ၊ 16:9 ၊ 16:10 နဲ့ ခေတ်စားနေတဲ့ 20:9 ၊ 21:9 ဆိုတာ Display Panel မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Aspect Ratio တွေပါ။
တနည်းအားဖြင့် Horizontal (အလျား) နဲ့ Vertical (ဒေါင်လိုက်) မှာ ပါဝင်တဲ့ Pixel အရေတွေကို ဖော်ပြတယ်၊ နောက်တနည်း အချိုးချထားတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါမယ့် ဘာဆိုလိုမှန်း သဘော မပေါက်ကြဘူး ဖြစ်နေကြတယ်။
သင်္ချာ သဘောအရ ပြောရင်တော့ Ratio ဆိုရင် စားတယ် (သို့) အပိုင်းချတယ်လို့ ပြောသလို 4:3 ၊ 16:9 တို့ဆိုတာ Horizontal နဲ့ Vertical ကို တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ အချိုးချ အသုံးပြုထားတာကို ဆိုလိုတာပါ။
ဒီတော့ 16:9 ၊ 16:10 တို့တတွေကို မြောက်ဖော်ကိန်းလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ဥပမာ 16 x? ၊9x ? လိုပေါ့
ဒီမြောက်ဖော်ကိန်းနဲ့ တွဲမယ့် Multiplier (x) များရင် တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ ယူဆနိုင်သလို ထောင်ကျော်နေတဲ့ Resolution ကိုကြည့်ပြီး ဘာ Aspect Ratio သုံးထားလဲ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
Based on Mulitplier
အဓိကအားဖြင့် Muliplier (x) စကားပြောတာ ဖြစ်ပြီး ဥပမာ 16:9 Format တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 1920 x 1080 ကို ပိုင်းဝေ၊ ပိုင်းခြေ အချိုးချပြီး အပေါ်ကို ၁၆ အောက်ကို ၉ နဲ့ စားကြည့်ပါ။ အဖြေက ၁ ကျန်ပါလိမ့်မယ်။
အလားတူ 16:10 Aspect Ratio ရှိ 3840 x 2400 ကို ပိုင်းဝေ ၁၆ ၊ ပိုင်းခြေ ၁၀ နဲ့ စားကြည့်ပါ၊ အဖြေ ၁ ကြွင်းပြီး Mulitplier (x) က ၂၄ ကျန်တာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ သက်ဆိုင်ရာ Aspect အလိုက် ၁ ကြွင်းရင် ဘာ Ratio မှန်း သိနိုင်သလို Mulitplier အလိုက် တန်ဖိုးကြီးလေ Resolution မြင့်လေ 16:9 နဲ့ 16:10 နှစ်မျိုးမှာ ၉ နဲ့ ၁၀ မြောက်ဖော်ကိန်းကြောင့် ppi ကွာတာကို သတိပြုပါ။
၁ ပမာဏသာ ကွာပေမယ့် ppi မှာတော့ ၁၀% ကနေ ၁၅% အဖြစ် 4K Resolution တွေမှာ ကွာသွားနိုင်လို့ပါ။
Image: Dota2 Dev
ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ Monitor Display မှာ သုံးလာတဲ့ Ultra-wide Screen ဆိုတာက အဓိကအားဖြင့် Horizaontal ကို ချဲ့လိုက်တာ ဖြစ်ပြီး 16:9 နဲ့ 16:10 Format နည်းတူ နားလည် ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် 20:9 နဲ့ 21:9 မှာ ဘယ်သူ ပိုသာမလဲ စာဖတ်သူတွေ သဘောပေါက်မယ်။ ဒါမယ့် Ultra-wide Aspect Ratio ကဏ္ဍမှာ သိစေချင်တာက Horizontal သို့ Vertical ချဲ့လိုက်ရင် အဓိက ကွာသွားမယ့် အချက်က Field of View ပါ။
ကျန်တာတော့ ထွေထွေထူးထူး မရှိတဲ့အတွက် ဂိမ်းကစားဖို့ သင့်တော်တဲ့ Viewing Angle ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။
Display Panel မှာ ရုပ်ပုံတွေကို ဘယ်လို ဖော်ပြသလဲ
ဒါကို Rendering လုပ်တယ်လို့ ပြောလို့ရသလို HD Streaming လုပ်တယ်လို့လဲ ခေါ်နိင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Display တစ်ခုတည်းနဲ့ မသက်ဆိုင်သလို ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Resolution နဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ HD အရည်သွေးထွက်လာဖို့ အဲ့ ၂ ချက်စလုံး ပြည့်စုံဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် HD Content ထောက်ပံ့ထားနိုင်မယ့် Hardware တွေရဲ့ ကဏ္ဍလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
Pixel Fillrate & Memory Bandwidth
ဒီ ၂ ချက်က Display ထက် အသုံးပြုထားတဲ့ GPU Power ကို ရည်ညွန်းတာ ဖြစ်ပြီး စာဖတ်သူတွေ ဗဟုသုတ အဖြစ် မှတ်သားနိုင်တာ Pixel Fillrate ဆိုတာ
၁ စက္ကန့် အတွင်းမှာ GPU ကနေ ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ Pixel ပမဏဖြစ်ပြီး အသုံးပြုထားတဲ့ Screen Resolution အလိုက် ကွာပါတယ်
ဆိုကြပါစို့ 1920 x 1080 မှာ Pixel အလုံးရေ ၂ သန်း ပါဝင်သလို GPU ကနေ ၁ စက္ကန့် Pixel ၂ သန်းနှုန်းနဲ့ ဖော်ပြရတယ်။
၁ စက္ကန့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ Pixel အရေတွက်ကို GPU Memory မှာ ပြန်လည် ရေးသားရပြီး သူနဲ့တွဲရက် လိုက်လာတာ Texture Fillrate ပါ။ များသောအားဖြင့် ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါနဲ့ Animation ၊ Edit ပိုင်း သုံးတဲ့အခါ ပါလာတဲ့ ကောင်ပါ။
Texture Fillrate ဆိုတာက
Texture Map Elements (Texels) တွေကို ၁ စက္ကန့်နှုန်း ပြေးနေတဲ့ Pixel တွေနဲ့ Mapping လုပ်ပေးရတဲ့ Process ပါ
My Old Fermi Graphics Card
Pixel Fillrate ကို MegaPixel သို့မဟုတ် GigaPixel per Second တန်ဖိုးနဲ့ တိုင်းတာပြီး ROPs (Raster Output Units) က ကိုင်တွယ်ပါတယ်။ Texture Fillrate ကိုတော့ TMUs လို့ခေါ်တဲ့ Texture Mapping Units က ထိန်းချုပ်တာပါ။
အခုလို Fillrate Process နှစ်ခုလုံးကို လျှင်လျှင်မြန်မြန် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ GPU Frequency နဲ့ တိုင်းတာ ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပြီး Final Stage အနေနဲ့ Process ၂ ခုလုံးကို Memory Bandwidth တန်ဖိုးနဲ့ ပြီးဆုံးစေပါတယ်။
သီအိုရီအရ Bandwidht မြင့်လေ ပိုကောင်းလေ ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုနေတဲ့ GPU အလိုက် စာဖတ်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ Ultra HD ဆိုတာ ဘာလဲ
Ultra HD အခန်း ကဏ္ဍ ဘယ်မှာ အရေးပါသလဲဆိုရင် သေးငယ်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကို Detail ကျကျ ဖော်ဆောင်ရတဲ့အခါ အရည်သွေး ကျမသွားဖို့ တာဝန်ယူရတဲ့ အခါပါ။
သီအိုရီအရ ကျနော် ပြောထားသလိုပဲ Resolution မြင့်လေ ၁ လက်မ ပုံဖော်မျက်နှာပြင် များလေ (ppi) နောက်တချက် Pixel သိပ်သည်းဆ များလာလေ ဖြစ်တဲ့အတွက် UHD တွေက ပို အရည်သွေး ကောင်းနေရတာပါ။
မြင်သာအောင် ပြောရရင် 16:9 Aspect Ration ရှိ 4K Resolution (3840 x 2160) မှာ 8 Million Pixel ပါဝင်ပြီး Full HD (1920 x 1080) မှာ2Million Pixel ပါဝင်ပါတယ်။
ခုလို Total Pixel ဘယ်လောက် ရှိသလဲဆိုတာကို Horizontal နဲ့ Vertical မှာပါတဲ့ Pixel အရေတွက် (1920 x 1080) ကို မြောက်ချလိုက်ရုံပါ
ဒီတော့ Pixel Count အရမ်း များသလို ppi ၊ Pixel Density လည်း ကွာသွားတဲ့အတွက် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အပိုင်းမှာ လုံးဝ အရှုံးပေးရတာပါ။
UHD & Color-bits
ဒါကြောင့် UHD Content တွေကို သုတေသန လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးများသလို သိကြတဲ့အတိုင်း Full HD ၄ ဆ ဖြစ်တာကြောင့် 4K Display ကိုထောက်ပံ့ဖို့ စွမ်းအားမြင့် GPU နဲ့ Motion Control (60 to 200 fps) လျှင်လျှင်မြန်မြန် Streaming လုပ်နိုင်ဖို့ လိုတာပါ။
နောက်ပြီး 4K နဲ့ 8K Display တွေဟာ အရမ်း အနုစိပ်လွန်းတဲ့အတွက် သူ့တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ Color Range၊ ပိုတောက်ပတဲ့ အလင်းအား (nits)၊ နဲ့ ခိုင်မာတဲ့ Contrast Ratio တွေ လိုအပ်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် UHD Panel တွေမှာ သာမန်ထက်ပိုများတဲ့ Colour-bit ဥပမာ 4K နဲ့အထက်မှာ 10-bit (HDR) ပါဝင်ပြီး Standard အတွက်ကိုတော့ 8-bit Support နဲ့ သုံးကြပါတယ်
TN တွေက 6-bit Support ပဲရတာကြောင့် ဘောင်မဝင်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် Ultra HD Content မှာ HDR (High Dynamic Resolution) Panel ဆိုပီး သီးသန့်ထပ်ထည့်ပေးထားလို့ သာမန် Display တွေမယှဉ်နိုင်တာပါ။
ဒါကြောင့် UHD Content တွေကိုကျ များသောအားဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲ အသုံးများကြသလို ပိုက်ဆံပေါနေသူတွေက 4K Setup တွေ ဆင်ပြီး ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ အနေနဲ့ သုံးကြပါတယ်။
UHD excel at Bigger Display
စမတ်ဖုန်းတချို့နဲ့ Laptop တွေမှာ 4K Panel ပါဝင်တာကို တချို့သူတွေက Gimmick ဖြစ်တယ် ဆိုကြပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် UHD Resolution တွေရဲ့ အားသာချက်က ကြီးမားတဲ့ Display တွေမှာ ပိုအသုံးတည့်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၃ လက်မ ၊ ၁၅ လက်မနဲ့ ဖုန်းလို ငုပ်စိ ၆ လက်မ မှာ ထည့်သုံးတာ မထူးဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။
သီအိုရီအရ စဥ်းစားကြည့်ရင် မလိုဘူးလို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် UHD အားသာချက်တွေဖြစ်တဲ့ Dynamic Range ၊ ပိုပြီးတဲ့ တိကျပြတ်သားတဲ့ Color အရည်သွေးနဲ့ High Resolution ရုပ်ပုံတွေ Edit လုပ်တဲ့အခါ သိသာတဲ့ အကျိုးပေးပါတယ်။
ငြင်းကျတဲ့အချက်က 4K နဲ့ Full HD Resolution ကွာခြားချက်က Screen ပိစိကွေးတွေမှာ မသိသာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
ဒါမယ့် Graphics Process အပိုင်းမှာတော့ ၄ ချိုး ၁ ချိုး ကွာနေတဲ့ Resolution ကြောင့် Physically မြင်နိုင်တာ စာဖတ်တဲ့အခါ ကြည်လင်ရုံတင်မက စာလုံးတွေ အရမ်း Sharp ဖြစ်ပြီး Clarity အရမ်းကောင်းနေတာပါ။
4K Content တွေဖြစ်တဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ Detail Level ကို Full HD Panel ထက် အနုစိပ် မြင်ရနိုင်ပြီး မကောင်းတာ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်တဲ့ Display Size ပါပဲ။
4K Resolution ပုံတွေကို Zoom ဆွဲကြည့် ဖြဲကြည့်ရုံမတပါး ထူးခြားတာမျိုး မရှိတဲ့အတွက် Bigger Size ကိုပဲ စဥ်းစားကြပါတယ်။
အရွယ်စားပိုကြီးတဲ့ 40″ နဲ့ အထက်မှာ UHD Panel အားသာချက် အသုံးချနိုင်ပြီး သီအိုရီအရ Full HD ၊ QHD Resolution တွေ မပေးဆပ်နိုင်တဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ၊ Contrast Ratio ကောင်းမွန်မှု အစရှိတာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Refresh Rate & Super Sampling
fps လို့ ပြောကြတယ်၊ Frame per Second ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ တစက္ကန့်ပုံဖော်နှုန်းနဲ့ ပုံရိပ်တွေ ချောမွေ့နေအောင် ပြသပေးတာပါ။ အများစု သိထားတဲ့အတိုင်း မြန်တယ်ဆိုတဲ့ အသုံးနှုန်းနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။
ဘာလို့မဆိုင်လဲဆိုတော့ Refresh Rate နဲ့ fps တိုက်ရိုက် အချိုးကြတယ်၊ နောက်တနည်းအားဖြင့် Motion Smootheness အတွက် အားဖြည့်တာဖြစ်လို့ မြန်ဆန်တဲ့ Screen သုံးရင် မှားကိုမှားပါတယ်
fps/Refresh Rate မြင့်လေ ချောမွေ့သွားပြီး Jagged သို့ Rough Edge လို့ သုံးကြတဲ့ စကားလို ပုံရိပ်နဲ့ စာလုံးတွေ တုံးတိဖြစ်နေတာ၊ လေးထောင့်ပုံစံ ထောင့်စွန်းဖြစ်နေတာမျိုး တစ်ခါတလေ ပြတ်ကျန်နေတာမျိုး နည်းသွားတာပါ။
သီအိုရီအရ Refresh Rate မြင့်လေ ပုံရိပ်တွေကို အထစ်ငေါ့ မရှိ Jagged Issue မရှိ ဖော်ပြနိုင်တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး 240 ၊ 300 လို Highest Panel တွေမှာ လုံးဝကို Smooth ဖြစ်နေတာ သတိထားမိမှာပါ။
World’s First 300Hz ROG Zephyrus GX701
ဒိအတွက် Display ၊ Graphics Power တို့ အဓိက လိုအပ်ပြီး Refresh Rate မြင့်မြင့် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ App ၃ ချက်လုံး လိုအပ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ Refresh Rate ကို ဖြည့်စွက်အနေနဲ့ စဥ်းစားနိုင်ပြီး Quality ပိုင်းက ဒီလောက်နဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။
ခုလို အရည်သွေးပိုင်း အရေးပါသလို ကျန်းမာရေး ရှုဒေါင့်ကနေ စဥ်းစားရမယ့် အချက်တွေ မေ့ထားလို့ မရပါဘူးဗျာ။ ဘာတွေလဲ ဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်….
PWM ရဲ့ သဘောတရားက Display ကို အလင်းလျှော့လိုက်ရင် အလင်းမှိန်သွားပေမယ့် Backlight ရဲ့ Light Intensity အလင်းပြင်းအား (Luminance: nits) လျော့မသွားတာကို ပြောတာပါ။
နောက်တနည်း Display တစ်ခုရဲ့ Brightness Control ပိုင်းကို တာဝန်ယူထားတဲ့ ကောင်ဖြစ်သလို LCD/LED Display တွေမှာ အလင်း အဖွင့်၊အပိတ် လုပ်ဖို့အတွက် Electronic Frequency (Hz ကြိမ်နှုန်း) နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။
အပိုင်း (၁) မှာ IPS Panel အသုံးပြုထားတဲ့ Display တွေဟာ သီးသန့် အလင်းလွတ်အလွှာပါဝင်တဲ့အတွက် များသောအားဖြင့် PWM Frequency မြင့်သလို အလင်းလွတ်လွှာ မပါတဲ့ OLED Panel မှာကျ ပြဿနာရှိပါတယ်။
သိတဲ့အတိုင်း Sub-pixel တစ်လုံးချင်းစီ အလင်း အတိုး၊ အလျှော့ လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် Individual Control ရတဲ့ OLED တွေဟာ နှေးကွေးတဲ့ ကြိမ်နှုန်းနဲ့ Operate လုပ်ပါတယ်။
အဲ့သလို PWM Cycle အဖွင့်၊ အပိတ် လုပ်နေတာကို သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်လို့ Frequency (Hz ) ကြိမ်နှုန်းများနေရင် မျက်စိကျန်းမာရေးတွက် သင့်တော်ပေမယ့် နည်းနေရင်တော့ ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။
နောက် PWM ကြောင့် မျက်စိညောင်းတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ကြိမ်နှုန်း 56Hz ကနေ 20000Hz ကြားကို Harmful Level အဖြစ် ကျွမ်းကျင်သူတွေက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
One of the Fewest Laptop that doesn’t use PWM Cycle
Flicker & Refresh Rate
Display Panel တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ Flicker ဆိုတာက Screen Refresh Rate ကျသွားရင် မြင်ရတဲ့ လှိုင်းထနေတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။
အထူးသဖြင့် 60 ကနေ 30 Refresh Rate အကြား Operate လုပ်တဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တာမျိုး ဆိုတာဖြစ်ပြီး
အနီးစပ် ဥပမာ ပြောရရင် အရင်တုန်းက CRT (Cathode Ray Tube) TV ကြီးတွေမှာ မြင်ရတတ်တဲ့ Screen ပေါ်က လှိုင်းပုံစံမျိုးပါ
PWM Cycle လိုပဲ Screen Refresh Rate ကိုလည်း ကြိမ်နှုန်း Hertz (Hz) နဲ့ပဲ တိုင်းတာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Refresh Rate နဲ့ သက်ဆိုင်သလို အလင်းလျှော့လိုက်တဲ့အခါ နှေးကွေးတဲ့ ကြိမ်နှုန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
Blue Light ဆိုတာ ဘာလဲ?
စာဖတ်သူတွေ ကြားဖူးနေကျ Blue Light Filter! သိမယ် ထင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်း ၊ Laptop တွေမှာ ပါဝင်လာတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပြီး ဘာလို့ Filter စစ်ထုတ်ရတာလဲ?
They are Powerful Light Ray
နေရောင်ခြည်ကလာတဲ့ Light Spectrum သို့ White Light ထဲမှာ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဝါ နှင့် အနီ စတဲ့အရောင်တွေ အဓိက ပါဝင်ပါတယ်။
Luminous Intensity အရ အလင်းရဲ့ Wavelength (nm) တိုလေ Energy များများပါဝင်လေ သဘောတရားတိုင်း မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်
Sun Rays မှာ (HEV – High Energy Visible Light) Blue Light အများဆုံး ပါဝင်ပြီး အခြား အရောင်တွေထက် ပိုမို ပျံ့နှံ့လွယ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လေထုထဲ ရောက်တာနဲ့ ရေငွေ့နဲ့ရိုက်ပြီး အလင်းပြန်တဲ့အတွက် ကောင်းကင်ကို အပြာရောင်လို့ မြင်ရတာပါ
လူတွေရဲ့ မျက်လုံးဟာ UV Rays တွေကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပေမယ့် HEV-Blue Light ကိုတော့ အပြည့်၀ မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။
Legends: Left (Visibile Light) Right (Invisible)
အခုလို Blue Light ထုတ်နေတဲ့ အရာတွေထဲမှာ နေရောင်ခြည်အပြင် ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ မီးချောင်းတွေနဲ့ အခြား အလင်းလွှတ် ပစ္စည်းတွေလဲ ပါဝင်ပါတယ်။
Blue Light ဆိုးကျိုးက
တစ်ချက်တစ်ချက် မူးဝေတာမျိုး၊ တောက်ပတဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် အမြင်အာရုံ ဝေဝါးသွားတာ၊ မျက်လုံးပြာသွားပြီ ရုတ်တရက် ဘာမှမမြင်တော့တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပြီး အဆိုးရွားဆုံးက အမြင်အာရုံ ပျက်စီးစေတာပါ
ဒီတော့ LED ပေါ် အခြေခံထားတဲ့ ဖုန်း ၊ Laptop တွေဟာ သာမန်ထက် အပြာရောင် ထုတ်လွှတ်နေတာကြောင့် စကားချည်လာတဲ့ Blue Light Filter ကို Built-in အနေနဲ့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ Laptop Display တွေအတွက် ထည့်ပေးလာပါတယ်။
ဒါမယ့်လည်း သီအိုရီအရ အပြာရောင် အလင်းအားကို သွားလျှော့လိုက်တာဖြစ်ပြီး Cool ကနေ Warm ပြောင်းသုံးသလို Software နဲ့ Cover လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သက်တော့ သက်သာသွားစေတယ်။
Image: Systweak Blog
Blue Light Filter ကို Software ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ရုပ်ပုံရဲ့ Color အရည်အသွေး လျော့ကျေသွားနိုင်တဲ့ အားနည်းချက်တော့ရှိပါတယ်
ဒါဆိုရင် Laptop၊ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးမှာ Display ပိုင်းက Performance ပိုင်းထက် ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောရင် သဘောမတူတဲ့ သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တကယ် ဝယ်ယူတဲ့အခါကျရင် ဝယ်လာတဲ့ Laptop မှာ Graphics Card တွေကတော့ လန်ထွက်နေပေမယ့် Display က ဂွမ်းနေလို့ သုံးရတာအဆင်မပြေတဲ့ အခါကျရင်တော့ နောင်တရကြပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Laptop Display တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ် Model က ကောင်းတယ်၊ ဘယ် Brand ကထုတ်တဲ့ ဟာကဖြင့် ဘယ်လိုအားသာချက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သေချာမသိသေးတာလဲပါပါတယ်။
လက်ရှိ Laptop Display တွေထဲမှာ ရုပ်ထွက်ရော Performance ပါ သိသိသာသာ ကောင်းနေတာက Retina Macbook Pro တွေပါ။
စက်ရုံကလာတဲ့ Uncalibrated မှာတောင် Color Reproduction ကောင်းပြီး ရုပ်ထွက်လည်း အတော် Smooth ဖြစ်ပါတယ်။ Retina Mac တွေ စွာနေတာက
RGB sub-pixel တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Aperture က တစ်ခြား IPS Display မှာပါတဲ့ RGB sub-pixel တွေထက် ပိုကျယ်တာကြောင့် အလင်းလွှတ်အားရော Color ထွက်ပုံပါ အတော်ကွာခြားတာမလို့ပါ
များသောအားဖြင့် Budget Latop ၊ Smartphone တွေမှာ ညံ့ဖျင်းတဲ့ Display ထည့်ပေးထားတတ်ပြီး Performance ပိုင်းမှာကျ Core i5 ၊ Snapdragon 675 စသဖြင့် ဂျင်းတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် Display ကလည်း Performance လိုပဲ အရေးကြီးတာကို သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
နောက်ဆိုရင် Latptop ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Smartphone ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Tablet ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် Display ပိုင်းကိုလည်း Performance လိုမျိုး ဦးစားပေး ဝယ်ယူကြဖို့ အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့လည်း Laptop သတင်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်ရအောင် လက်လှမ်းမီသမျှ Update News တွေကို တင်ဆက်နေပါတယ်။
တခါထဲလေ့လာနိုင်အောင်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ Link တွေမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား
၁။ MSI GS65 9SD Stealth First Impression
၂။ MSI GS65 9SD Stealth In-depth Review
၃။ CES 2020 မှာ မိတ်ဆက်သွားတဲ့ MSI Gaming Laptop များ
၄။ ASUS ကြေညာလိုက်တဲ့ 2020 ROG Series Gaming Laptop များ
၅။ အကောင်သေးပေမယ့် ပိုအဆိပ်ပြင်းလာတဲ့ Razer Blade V4 (2020)
၆။ Q-LED Display နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy Book Flex နဲ့ Ion
၇။ 10th Gen Processor ၊ Magic Key အသုံးပြုလာတဲ့ MacBook Pro 13 (2020)
၈။ Microsoft ကြေညာလိုက်တဲ့ Surface Book3နဲ့ Surface Go 2
ဤဆောင်းပါးသည် စုဆောင်းရသမျှ ဗဟုသုတတွေကို တင်ဆက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Review & Rating အရ ကစားကြည့်သင့်တဲ့ Video Game အမျိုး ၅၀ Part 1
120Hz Display နဲ့အတူ ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တင်ထားဖွယ်ရှိတဲ့ iPhone 12